Dalalka G20 oo ugu baaqay dalalka Eurozone in ay kor u qaadaan lacagaha sanduuqa badbaadinta ee dalalkaasi. – Radio Daljir
Dalalka G20 oo ugu baaqay dalalka Eurozone in ay kor u qaadaan lacagaha sanduuqa badbaadinta ee dalalkaasi.
Brussels,Feb 27 – Wasiiradda maaliyadda labaatanka dal ee ugu hodonsan aduunka ee G20 ayaa weydiistay dalalka suuqa aagga Euro in ay lacago badan geliyaan sanduuqa badbaadada ee loogu talagay in lagu kabo dalalka ay soo food saarto dhibaatada dhaqaale ee ka imanaysa dhinaca deymaha.
Wasiiradan dalalka G20 ayaa sheegay,in ay doonayaan in ay lacago samata-bixin ah ku kharashgareeyaan dalalka la daalaa dhacaya dhibaatada deymaha ee ka taagan dalalka suuqa aagga Euro ,laakiin waxa ay tilmaameen in marka hore dalalkaasi looga baahanyahay in ay iyagu kor u qaadan lacagaha ay gelinayaan dhinaca sanduuqa badbaadada.
Dalalka G20 ayaa ku tilmaamay tallaabadan mud muhiim ah , waxana ay balanqaadeen in ay lacago siinayaan sanduuqa lacagta ee caalamiga ah ee IMF.
Horaantii bishan dalalka suuqa Eurozone ayaa asaasay sanduuqa joogto ah oo dhinaca samata ?bixinta ah ,waxana lacagta sanduuqaasi ay gaadhaysay 500 billion oo euro oo u dhiganta ($673 billion oo dollar ama ?420 billion oo pound ).
Waxaa isasoo tarayey dareen laga muujinayey in lacagaha sanduuqa samata bixinta aanay ku filnayn marka la eego sidii dalalka aagga eurozone looga badbaadinlahaa dhibaatada dhaqaalaha ee imika ka jirta.
Dalka Giriiga oo ay haysato dhibaatada deymaha ayaa dhowaan meelmariyey qorshaha gunti-giijiska oo la filayo in uu lacago kabid ah kaga halo dalalka aaga Euro iyo sanduuqa lacagta ee caalamiga ah ee IMF.